Loza teny Imerinkasinina :: Namoy ny ainy ity vehivavy nitondra môtô • AoRaha
Loza teny Imerinkasinina Namoy ny ainy ity vehivavy nitondra môtô
Nindaosin’ny faha­fatesana noho ny loza nahazo azy teny Imerinkasinina, afak’omaly tolakandro, ny vehi­vavy iray, manodidina ny enina amby roapolo taona. Nifandona tamina môtô iray ny kodiaran-droa noentiny. Maratra mafy ka mbola tsaboina eny amin’ny hopitaly ny lehilahy tra-doza niaraka taminy.
Nitondra môtô « scooter » avy any Imerinkasinina ny vehivavy iray no nifanena tamina môtô « scooter » iray noentina lehilahy. Nandeha mafy ilay kodiaran-droa voa­lohany, araka ny voalazan’ny angom-baovao nataon’ny mpitandro ny filaminana. Niezaka nandeha niadana, rehefa nahatazana izany, ny môtô faharoa, kanjo nifatratra teny aminy ihany.
«Nanao aroloha ilay lehilahy raha tsy nahitana izany kosa teny amin’ilay vehivavy. Samy naratra mafy ny roa tonta. Potika ihany koa ny môtô noentin’izy ireo. Tsy naha­­tsiaro tena tetsy andaniny ilay vehivavy», hoy ny zandary.
Noentina teny amin’ny hopitaly ireto maratra. Tsy tana ny ain’ilay vehivavy. Tapaka ny tongotra havia, nisy loaka ny tanana havian’
ilay lehilahy. Ity farany izay voalaza fa mbola tsaboina ao amin’ny sampana fameloman’aina eny amin’ny hopitaly.
Asan-jiolahy mahery vaika Tratra ilay naka an-keriny ny zanaky ny Ben’ny tanànan’Antananarivo
Morondava Mpitandro filaminana voatondraka maloto
Tranga voajanahary Olona enina tsy hita popoka noho ny rambon-danitra
Vono olona :: Lehilahy maty voalaza fa novonoin’ny rafiny
Fihanaky ny valanaretina Mahatratra telo amby efapolo indray ireo mararin’ny « coronavirus »